Rugby – XV de France : nantsoina i Mathieu Bastareaud | NewsMada
Rugby – XV de France : nantsoina i Mathieu Bastareaud
Mialoha ny hiatrehan’ny XV de France ny All Blacks, ny asabotsy 11 novambra ho avy izao eo amin’ny lalao fitsapana, taranja rugby, nantsoin’i Guy Novès, mpanazatra frantsay, i Mathieu Bastareaud, hanatevina ny ekipa. Anisan’ireo mpilalao nahazo fiantsoana ihany koa ilay «ouvreur»-n’i Toulon, i Anthony Belleau. Etsy ankilany, voatery najanona i Yoann Maestri sy i Uini Antonio.
Nomarihin’ity mpanazatra ny ekipam-pirenena frantsay ity fa tsy nanome izay tokony ilaina, tamin’ireo lalao nataony i Maestri, izay mitana ny toeran’ny «2 ème ligne». Toy izany koa i Uini Antonio, izay tsy nahafa-po azy, eo amin’ny «pilier», izay matetika manao fahadisoana eny ambony kianja.
Etsy andaniny, ao anatin’ny tanjany tanteraka ankehitriny i Mathieu Bastareaud ka naharesy lahatra an’i Guy Novès hiantso azy. Na eo aza izany rehetra izany, tsy nanary an’i Maestri tanteraka akory ny mpanazatra ny ekipam-pirenena frantsay fa mbola nametraka azy ao amin’ny lisitra faharoa. Hijoro ny lehilahy, amin’ny lalao miverina, hikatrohana amin’ny All Blacks, ny 14 novambra ho avy izao, ao Lyon. Tsiahivina fa ankoatra ity lalao tsapa amin-dry zareo Nouvelle-Zélande ity, mbola hisy fihaonana roa hafa hatrehin’i Frantsa : ny fifandonana amin’ny Springboks, Afrika Atsimo, ny 18 novambra, sy ny amin’i Japon, ny 25 novambra ho avy izao.